Google Custom Search Engine For Social Network မြန်​မာ​တွေအသုံးများတဲ့ SocialcNetwork ​တွေကိုပဲစုစည်း ​ပေးထားပါသည်​ Google Custom Search Engine
​မြောက်​ကိုရီးယား နိုင်​ငံမှ Hacker များသည်​ Mac OS အသုံးပြုသူများကို ပစ်​မှတ်​ထား​နေ Gustuff Maleware သည်​ Crypto Curency App များမှ User name password များကို ခိုးယူ​နေ Crypto Currency App 32 မျိုးနှင့်​ Bank ​ပေါင်း ၁၀၀ ​ကျော်​ထံမှ ခိုးယူ​နေ အိန္ဒိယ မှပြုလုပ်​​သော Mission Shakti သည်​ အာကာသအတွင်းရှိ Satellite များကို ပစ်​ခတ်​နိုင်​ပြီဖြစ်​သည်​ Venezuela နိုင်​ငံ​အတွက်​ Russia မှ Cyber Security ကျွမ်းကျငိသူ ဝန်​ထမ်းများ​ရောက်​ရှိ ရုရှားသမ္မတ​နေထိုင်​​သော​နေရာများကို Drone ပျံသန်းခြင်း မပြုနိုင်​ရန်​ Gps Spoofing နည်ပညာအသုံးပြု FBI သည် ​Dark Web များမှ Cryprto Cureency 4.5 million ရှာ​ဖွေသိမ်းဆည်း EU နိုငိငံများသည်​ 5G network ကိုလုံခြုံ​စွာပြုလုပ်​ရန်​နှင့်​ UK မှ Huawei telecom Product များကို အသုံးမပြုတားမြစ် ASUS ကွန်​ပျူတာမှ Driver နှင့်​ Application update ​ပေး​သော Server မှတစ်​ဆင့်​ malware များပျံ့နှံ့
Open Source Intelligent (OSINT TOOLS)
Social Network OSINT FACEBOOK TOOL FACEBOOK PEOPLE FINDER facebook id Search Who Post What ? faceboook live video search extract data from facebook profile ================== Twitter Advanced Search Twitter Account Analysis Twitter list twxplorer tweet analyzer Search for hashtags on Twitter, Facebook & Google+. Analysis Twitter account tweet-mapper Tweet-Map ================== Linked Search ================== Instagram Story Instagram Search Instagram Save Instagram Target Audience and Influencers ======================================================== Terrorist Organizations rating amazon ================== email check Mail Tester header-analysis validating email verify -Email -address ================== Public Record News-Paper-Map International relations and armed conflicts global news U.S. Newspaper Directory, 1690-Present Email Tools Email_Format Email_Verifier mail-check validate-email Mail_Check Mail_Check_Bing regis
Currency စနစ်​​တွေလဲ​တွင်​ကျယ်​လာဖို့ စ​နေချိန်​ တစ်​ခါတစ်​ရံမှာ bios က​နေပြီး ဝင်​ပြီး Forensics data collection လုပ်​ရတဲ့အခါလဲရှိပါတယ်​ ... laptop အမျိုးအစားModel အလိုက်​ bios keys A+သမား​တွေလဲအသုံးဝင်​ပါတယ်​ Download Link ==> https://drive.google.com/file/d/1jMDQVXAedwNglgftXFzp_wM2r9NFIrc_/view?fbclid=IwAR2izGot8QARS3_IKvJRNDoQTJUXX8jUQneaj4gZaHdY92Jy1Fy4y61Q2q8
Google Custom Search Engine For Social Network မြ...